Matahotra ny Gambiana Fa “Mampidi-doza ny Fiainan’ny Olom-pirenena” Ny Filoha Jammeh Noho ny Fitsipahany Ny Voka-pifidianana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Desambra 2016 15:56 GMT
Filoha Gambiana Yahya Jammeh. Sary avy amin'ny Trano Fotsy nampidirin'ny mpisera Wikipedia Alifazal an-tserasera. Sary azon'ny rehetra ampiasaina.
Notsipahan'ny filoha Yahya Jammeh ao Gambia, firenena kely ao Afrika Andrefana, ny vokatra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena voalohany Desambra izay nandresen'ny lehiben'ny firaisamben'ny mpanohitra Adama Barrow azy. Tamin'ny fandaharana tamin'ny fahitalavitra, nitsikera ny vaomieran'ny fifidianana i Jammeh ary nanolo-kevitra ny hanaovana fifidianana vaovao karakarain'ny olona “matahotra an'Andriamanitra”.
Efa nanaiky ny fahareseny i Jammeh teo aloha ary nampanantena famindram-pahefana milamina, efa nofariparitany ho “tsy laitran'halabato” sy mangarahara ny rafi-pifidianana tao Gambia, ary nampiany fa “fandresena mazava” no azon'ny mpanohitra. Nanome toky fa tsy hivadika amin'ny filoha voafidy ny Lehiben'ny Fiarovana (lehiben'ny tafika) rehefa nanao izany i Jammeh.
Na izany aza, nivoaka 24 ora taorian'ny nanomezana grady an'ireo nivoaka ho manamboninahitra miisa 49 ao amin'ny Tafik'i Gambia ny fandavan'i Jammeh ny voka-pifidianana. Nisy ny tatitra tsy voamarina fa nanery an'i Jammeh mba hanaiky ny faharesena ny sasany tamin'ireo mpikambana ambony ao amin'ny tafika.
Ity ny lahatsary ahitana an'i Jammeh mandà ny vokatra.
Taorian'ny fanambarany tao amin'ny fahitalavi-pirenena, niditra media sosialy ny Gambiana mba hanohitra ny fanapahan-kevitr'i Jammeh.
Nitsikera ny fihetsik'i Jammeh i Sait Matty Jaw, nilaza izy fa mety hampidi-doza ny filaminana sy ny fahamarinan-toeran'ny firenena i Jammeh.
Notsipahan'ilay mpanao didy jadona ao Gambia ny fifidianana marina izay nokarakarainy sy nahatonga azy ho resy. Napetraka ao anatin'ny toerana mampanahy indrindra i Gambia. Amin'ny maha Gambiana anay, efa niteny mafy sy mazava izahay fa tsy mila ny servisin'i Jammeh. Nahatonga ny firenena kely ho ao anaty toerana ratsy dia ratsy mahatonga ny fifantohan'izao tontolo izao avy hatrany ny fihetsiny ankehitriny. Resy tao anatin'ny rafitra noforoniny i Jammeh ka mampidi-doza ny fiainan'ny olom-pirenena ankehitriny.
Nampitandrina i Kemo Cham fa mety ho meloky ny famadihan-tanindrazana izay manohana ny fitsipahan'i Jammeh ny voka-pifidianana
Na iza na iza, anisan'izany ny tafika Gambiana, ka manohana ity lehilahy ity, dia mitovy amin'ny mamadika tanindrazana.
Na dia ny olona nanoratra izany kabary izany aza, Fantatro fa tsy dia marani-tsaina loatra izy ka hiteny Anglisy tsara tahaka izany
Nanoratra ny fanapahan-kevitr'i Jammeh ny mpisera media sosialy hafa: “Amin'izany, mangarahara tsara tahaka ny vato kristaly fa te hampiditra ady amintsika izy. Ny fara-fanantenantsika dia ireo mpikambana ao amin'ny Tafika mitampiadiana hitsangana ho an'i Gambia.”
Raha nanoratra kosa i Samsudeen Phatey hoe: “Yahya Jammeh, nilaza ianao fa sitrapon'i Allah izany ary tsy hametra-panontaniana mandrakizay amin'i Allah ianao. Nahoana no mametra-panontaniana amin'i Allah ianao ankehitriny?
Nisioka antso hanao zavatra tamin'ireo mpitarika isam-paritra ao amin'ny Vondrona Afrikanina sy ny Fikambanana Ara-toekarena ao amin'ny Firenena Afrikanina Tandrefana (CEDEAO) i Jeffrey Smith:
Ny fitarihana ao amin'ny Vondrona Afrikanina sy CEDEAO: Fotoana izao hampanan-danja, fotoana izao ijoroana manoloana ity mpisetrasetra ity indray mandeha sy ho an'ny rehetra. Tsy azo ekena izao.
Madi Jobarteh, mpikatroky ny zon'olombelona, nanamarika fa tsy mifanaraka amin'ny lalàna Gambiana ny fanapahan-kevitr'i Jammeh.
Tsy mifototra amin'ny lalàna ny fanambaran'i Prez Yaya Jammeh hitsipaka ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 1 Desambra. Tsy manaja ny lalàmpanorenana izany ary fanitsakitsahana ny fiandrianam-pirenena sy ny fahamendrehantsika.
Nototonsaina 9 andro lasa ny fifidianana. Nankatoavin'ny solontenan'ny antoko rehetra ny voka-pifidianana isaky ny foibem-panisana, anisan'ny nankatoa izany ny APRC, [antokon'i Jammeh]. Nambaran'ny Filohan'ny [Vaomiera tsy miankina Misahana ny Fidianana] ny voka-pifidianana izay nanambara tao amin'ny fahitalavi-pirenena fa i Adama Barrow, no lany filohan'ny Repoblikan'i Gambia. Tamin'ny 2 Desambra, nanaiky ny fahareseny i Yaya Jammeh ary niantso mba hiarahaba ny filoha voafidy tao amin'ny fahitalavi-pirenena
Nisioka i Dokotera Isatou Touray, izay nanaisotra ny firotsahany hofidiana mba hanohana ny mpanohitra Adama Barrox hoe:
Fanitsakitsahana ny demaokrasia ny fitsipahan'ny filoha Jammeh ny voka-pifidianana.
Mandritra izany, misy ny fametrahana miaramila goavana manerana ny renivohitra, miaraka amin'ny fisavana ara-piarovana napetraka isaky ny toerana stratejika. Nilaza i Jammeh fa nampanantena tsy hanohintohina izay fihetsiketseham-bahoaka izy ary nandrisika ny tsirairay mba handeha hamonjy ny asa mahazatra mandra-pahatontosa ny fifidianana vaovao.
Nomelohin'ny minisitry ny raharaham-bahiny Senegaley ny fitsipahan'i Jammeh ny voka-pifidianana. Araka ny tatitra maro, voalaza fa nampiantso fivorian'ny Filan-kevi-piarovan'ny Firenena Mikambana mikasika ny toe-draharaha izy ary nampahafantatra ny fikambanana ara-paritra tahaka ny CEDEAO sy ny Vondrona Afrikanina.
Nantsoin'ny Vondrona Afrikanina ho “Tsy misy dikany sy tsy manan-kery” fanambaran'ny filoha Jammeh ny fitsipahana ny fahareseny satria efa nanaiky ny fahareseny izy. Nandrisika ny filoha Jammeh ny Vondrona Eoropeana mba hanaja manontolo ny lalàna sy ny hevi-bahoaka Gambiana
Nandritra izany fotoana izany, tsy navelan'i Gambia hiantsona tao amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Banjul ny filohan'ny CEDEAO
Nilaza ny antoko resy hafa, Kongresy Demaokratika Gambia (GDC), tarihin'i Mamma Kandeh fa diso fanantenana tamin'ny fitsipahan'i Jammeh ny voka-pifidianana izy, nampiany ihany fa koa fa nanaiky ny voka-pifidianana ny GDC.